Muxuu waqti dheer u qaatay shirka madaxda ee Muqdisho? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Muxuu waqti dheer u qaatay shirka madaxda ee Muqdisho?
“Waxay u baahnayd in hurmar laga sameeyo arrinta amniga. Markii wax lagu heshiiyo waa in la qaado tallaabooyiin muuqda,” ayuu yiri Guleed oo la hadlay BBC-da.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaadatay go’aan dhexdhexaad ah oo ku aadan khilaafka u dhexeeya dalalka Khaliijka. Wadamo uu hoggaaminayo Sacuudiga ayaa go’doomiyay dalka Qadar.
Previous articleMuwaadiniinta Maraykanka oo looga digay inay u socdaalaan Soomaaliya
Next articleMadaxda Soomaliya oo go’aan midaysan dul dhigtay sariikiisha AMISOM (Sawiro)